लोकसेवाको तयारी कसरी गर्ने ?प्रश्न कसरी हल गर्ने ? लेखाइ कस्तो हुनुपर्छ ?
HomeTipsलोकसेवाको तयारी कसरी गर्ने ?प्रश्न कसरी हल गर्ने ? लेखाइ कस्तो हुनुपर्छ ?
लेखाई कला हो । यो सूचनाको प्रस्तुतीकरण गर्ने माध्यम पनि हो । यो व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ । राम्रो लेखनका लागि अभ्यास जरुरी हुन्छ । लेखाइ प्रस्तुतीकरण भएकाले लेख्दा सानो वाक्य संरचना, ओजिला शब्द, तथ्यपूर्ण तर्क र आफ्नो मौलिकपन पोख्न सक्नुपर्छ । लेखाइ सरल वाक्यांशबाट सुरु गर्नुपर्छ । अब्बल र सुन्दर लेखनका लागि साधनाको आवश्यक पर्छ । तसर्थ प्रत्येक दिन एक/दुई प्रश्नको हल गर्ने बानी बसाल्न सके लेखाइ आकर्षक बनाउन सकिन्छ । अभ्यासले अभ्यस्त बनाउने भएकाले नलेखी र नपढी लेख्न जानिँदैन । कुनै विषयवस्तुप्रति पर्याप्त सूचना संकलन नगरी लेख्न सकिँदैन । बिना सूचना प्रस्तुतीकरण संभव नै हुँदैन ।
लेखाई सुन्दर र आकर्षित हुनुपर्छ । यसको अर्थ जाँचकीलाई ‘लट्ठ’ पार्ने किसिमको हुनुपर्छ । विषयवस्तुप्रतिको बुझाइ, ज्ञान र त्यसप्रतिको आफ्नो धारणले लेखाइ अझ उत्कृष्ट बनाउन सहज गर्छ । बुझाइ, ज्ञान र धारणाबीच उचित तालमेल मिलाउँदै सिलसिलेवार प्रस्तुत गर्न सके लेखाइ अझै रसिलो हुन्छ । लेखन उत्कृष्ट बनाउन विषयवस्तुबारे ज्ञानसँगै शब्द चयन, वाक्य संरचना र सिर्जनशिलता (मौखिकपन) मा ध्यान दिनुपर्छ । यिनको उचित संयोजनले नै सुन्दर र आकर्षित लेखाइ बन्न सक्छ ।
ज्ञानले सधै सबैलाई हसाउँछ । सम्बन्धित विषयवस्तुप्रतिको ज्ञान बिनाको लेखाइ खोक्रो र हलुका हुन्छ । विषयवस्तुप्रतिको आफ्नो धारणा बनाउन विषयवस्तुको उद्भव, सैद्धान्तिक, व्यवहारिक, कानुनी, संवैधानिक र विश्वजगत पक्षबारे गहन अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ । टुक्रे, बोक्रे र छोटो अध्ययनले विषयवस्तुप्रति सधै अनविज्ञ बनाइराख्छ । गहन र गहिरो अध्ययनपश्चात त्यसलाई आफ्नो समाज, कानुन र व्यवस्थासँग प्रतिबिम्बित गरेर हेर्दै आफ्नै धारणा बनाउनुपर्छ । जस्तै : कानुनी शासनबारे लेख्दा रुल अफ ल र रुल बाइ ल बीचको फरक, सुप्रिमेसी अफ ल, इक्विेटी बिफेर दि ल, अकाउन्टबिलिटी टु दि ल, सेप्रेसन अफ पावरर्सलगायतबारे परिचित हुनुपर्छ । साथै कानुनका शासनको अवस्थाबारे प्रकाशित प्रतिवेदन र मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनबारो जानकार हुनु आवश्यक छ ।
त्यस्तै नेपालमा यसको संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत र व्यवहारगत पक्षबारे जानकार हुनुपर्छ । नेपालमा यसको महत्व, सबल पक्ष, सुधार्नुपर्ने पक्ष र चुनौतीका विषयमासमेत प्रष्ट हुनुपर्छ । विषयवस्तुबारे जानकारी भयो भने परीक्षार्थीमा आत्मविश्वास जगाई सहजै उत्तर दिने आँट दिन्छ ।
वाक्य संरचना छोटो, सरल र बुझिने किसिमको हुनुपर्छ । शब्द छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जाँचकीलाई अलमल पार्ने, दोधारे अर्थ दिने शब्दको प्रयोग गर्न हुँदैन । सकबर ओजिला शब्द छनोट गर्नुपर्छ । हाम्रोमा बूँदागत, प्याराग्राफ र चित्रात्मक रूपमा लेख्ने प्रचलन छ । जसरी लेखे पनि सटिक उत्तर दिँदा केही फरक पर्दैन । प्याराग्राफमा लेख्दा ४/५ लाइनभन्दा बढीको बनाउँदा त्यति सुन्दर देखिदैन की ? त्यसमा विचार गर्नुपर्छ । यो टपिकबाट यो प्रश्न आयो भने यसरी लेख्छु भनेर पूर्वयोजना बनाउनुपर्छ । यसमा कपीको मार्जिन मिलाउनेदेखि लेख्ने समयसम्म निर्धारण गर्नुपर्छ । शब्द छनोट, अक्षरको सुन्दरता र वाक्य संरचना आफैमा उत्तर त होइनन् । तर, लेखेको उत्तरमा मिठास भरेर जाँचकीको मन जित्न उद्दत भने पक्कै गर्छन् ।
प्रशासन डट कमबाट।